Ukuqapha Isitshalo Esikhulayo Sahobhane
Esikhathini esithile ngemuva kokutshala ama-rhizomes akho e-hop, amabhilidi azovela emhlabathini. AmaHops akhula emabhodini (okungafani nemivini lapho ekhuphuka ngamahlumela awo, angasebenzisi ama-tendril noma ama-suckers) okudingeka aqeqeshelwe isikhala esinqamile. Uma sebeqeqeshwe nxazonke nge-trellis noma i-hop twine bazoqala ukukhula ngendlela engafani nhlobo ngokwabo. Izitshalo ezine ezine ezinempilo kufanele zikhule kusuka kuzo zonke izitshalo / rhizome.
Buka isitshalo sakho ukuze uqiniseke ukuthi awekho amahlumela abonakalisiwe noma abuthakathaka. Ungavumeli ama-bines akho ukuthi angeneke njengoba lokhu kuzogqugquzela ukuqhuma okungaholela ekulimaleni komthunzi nokukhulelwa. Hlola amaqabunga njalo ukuze ubheke isikhunta esimhlophe futhi uphelele izinambuzane ezifana ne-aphid.
Hlola inhlabathi ezungeze isitshalo sakho uphinde uhlume ukhula nezinhlayiya ezizovimbela ukukhula. Kumele futhi ugcine umhlabathi owomanzi, noma kunjalo, uqaphele ukuthi ungaphili amanzi. Nisela isitshalo sakho ekuseni ukuze uvumele amaqabunga ukuthi asomile emini. Kuhlola okwenziwa ngezikhathi ezithile kuphela okudingekayo.
Ukuqapha isitshalo sakho kubalulekile njengoba izinkinga ezitholwa kusencane kulula ukulungisa.
Indlela Yokunakekela Uhobhane
Uma izimbongolo ziphuma emhlabathini yisikhathi sokuqala ukukhathalela izitshalo zakho. Amabhontshisi alungele ukuqeqeshwa uma ephakeme ngo-15 cm. Bangakwazi ukuqeqeshwa ngokugcotshwa ngobumnene bezungeza i-trellis noma i-hop twine. Lokhu kudinga ukuthi kwenziwe ngezinsuku ezimbalwa, emva kwalokho amabhodlela azoqala ukukhula ngendlela engafani ngokuzikhethela ngokwawo futhi angahlolwa njalo.
Njengoba isitshalo sikhula kubalulekile ukususa noma iziphi amahlumela abuthakathaka noma abonakalisiwe. Uma izinhlanzi sezikhulile izinyanga ezimbalwa kungumqondo omuhle wokunciphisa amaqabunga ezansi ngaphansi kwe-60 cm yesitshalo ukuvimbela umonakalo wezifo kanye namafungus. Ungakwazi ukondla nokudla okunomsoco (ucele) izitshalo zakho zitshala ngezikhathi ezithile, kuye ngokuthi yini edingekayo. Susa konke ukhula namanqamu omhlabathi oseduze naleso sitshalo.
Uma ubona noma yikuphi isikhumba esimhlophe se-powdery phansi kwamaqabunga amancane, khipha ngokushesha futhi uwalahle ngaphandle kwegceke lakho. Ungasebenzisa i-pesticide yemvelo ukulawula ama-aphid nezinye izinambuzane eziphazamisa isivuno sakho. Ukunakekela isivuno sakho ngokuqhubekayo kuze kube yilapho amahlumela ekulungele ukuvunwa ngasekupheleni kwehlobo.
Isikhathi sokuvuna ama-hops akho sizohluka kuye ngokuthi indawo yakho nonyaka, kodwa ukuvunwa ngokuvamile kwenzeka ehlobo laseNingizimu Afrika. Kufanele uhlole amaqabunga esitshalo sakho njengesibonakaliso sesikhathi sokulungele ukuvunwa.
Uma amaqabunga e-cone ye-hop eqala ukuguqula umbala omnyama nempapu emaphethelweni ama-hops alungele ukuvunwa. Ukuze uqiniseke, ungaphula i-hop cone evulekile. Izigulane ze-lupulin phakathi (okuyisisekelo) kufanele zibe ziphuzi futhi zinyene. Khetha izintambo ezilungele futhi ushiye ngemuva kwazo ezingekho. Qinisekisa ukuthi awuyikuvuna ama-hops ngaphambi kokuba avuthiwe njengoba lokhu kuzokwenza ukuthi i-potency yabo ingathinteki futhi kuthinte kabi ukunambitheka kwebhiya.
Ukuvuna uhobhane, hlela ngokucophelela ama-cones ama-hop avela kumahlumela.
Uma unesitshalo seqoqo esivunyiwe kudingeka usomise ukuze sisetshenziswe. Beka izitshalo ezivuthiwe endaweni ephansi. Qinisekisa ukuthi bafaka kuphela ungqimba olulodwa olujulile futhi bangaphandle kwelanga. Uma bewomile, flip them over ukuqinisekisa ukuthi ngokulinganayo eyomile nxazonke. Le nqubo kufanele iqhutshwe kuze kube yilapho i-hoops isomile ngokuphelele - yilapho lapho i-stem yangaphakathi ibonakala khona ngokwanele ukuze iphule futhi ingaphenduli. Ama-hops omisiwe manje angagcinwa esitsheni esingenalutho efrijini kuze kube yilapho ufisa ukuwasebenzisa.
Okunye Ukusetshenziswa Kwahobhane Ngaphandle kweBhiya
Amahops ayaziwa ngokuthi asetshenziselwa ukwenza ubhiya, kodwa angasetshenziselwa ezinye izinjongo. Uhobhane usetshenziselwa imithi eminingi yabantu kanye nemithi yokwelapha ukunciphisa ukuleleka, ukunciphisa ukukhathazeka nokusiza ekugayeni phakathi kwezinye izinto. Ucwaningo luyenziwa ukunquma ukuthi lungasetshenziswa yini ekunciphiseni izimpawu zokuya esikhathini nokuya esikhathini.
Ezingxenyeni zokusetshenziswa njengesithako sebhiya, ngezinye izikhathi ama-hops asetshenziswa njengesithako ezihlukahlukene zokupheka zokudla nezinye izidakamizwa zemvelo futhi angaphathwa ngisho nokwenza iphepha elihle.